Ihe Ntanetị Blog na-amasị na Mmasị | Martech Zone
Saturday, January 16, 2010 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Blog Blogs di na nhazi oge obula. M na-agbaso ndị na-ede blọgụ ahịa na Twitter ma nwee ọnụọgụ ahịa azụmaahịa bazillion na-agụ akwụkwọ m (nke m na-anaghị esochi). M na-agụkarị blog ma kwụsị n'ime ụbọchị ole na ole n'ihi ọdịnaya, ndị ọzọ m gụrụ kemgbe ọtụtụ afọ.
Ekwetaghị m na e nwere blọgụ ahịa # 1 ọ bụla na ntanetị. Aga m eme ihe n'eziokwu ma gwa gị na, n'agbanyeghị na m na-akwanyere akwụkwọ Seth Godin ùgwù, abụghị m onye na-akwado ya blog ma ọlị. Enweela m akwụkwọ ọhụrụ nke Set, Linchpin: You Dị Oké Mkpa?,… Mana anaghị m agakarị na blọọgụ ya. Seth na-atụfu ogbunigwe kwa ụbọchị kwesịrị ịtụle - mana na-enweghị azịza ọ bụla, enweghị ohere iji kpaa.
Enwere m ekele maka iche iche nke ịgụ ọtụtụ blọọgụ ahịa na-enye. Ire ahia bu isiokwu di iche-iche n’onwe ya, sitere na mgbasa ozi ndi ozo, igbasa, ka njirimara nke onwe na mgbasa ozi ohuru. Ire ahia gụnyere azụmahịa, ahịa, na usoro mgbasa ozi.
My Blog Blog amasị
Y’oburu n’inwe blog di na ahia, ikwesiri ime ihe ikwusa ma kesaa na nsonaazụ ya.
Ọ bụrụ n’ị na-agwa ndị na - agụ akwụkwọ gị gbasara ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ, gbaa mbọ chọpụta na akaebe agachaghị. A na-egosikarị data na ajọ mbunobi.
Blọọgụ ịre ahịa kwesịrị inye ngwaọrụ na usoro dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ime ụdị mkpọsa ahụ.
Blog blọgụ kwesịrị ịrịọ ikwu na nzaghachi ma nye echiche ndị ahụ ka a mata light ọbụna ikwe ka ndị na-ekwenyeghị na ohere ọbịa post.
My Blog Blog achọghị
Blọọgụ ahịa nke na-edebe, na-ekwu ma na-agbagharị ozi - anaghị enye aka na nka nke blọọgụ niile kwesịrị inye.
Ndị na-ede blọgụ ahịa kwesịrị imechi ọkwa ọ bụla na-achọpụta na ha kesara ụfọdụ ụdị ozi bara uru na a ahia… Ọ bụghị naanị onye na-agụ nkezi.
Blọọgụ ịre ahịa ekwesighi ịbụ maka ahịa, ha kwesiri ịdị maka ndị ahịa, usoro, ngwa ọrụ, usoro na nsonazụ ya.
Of couse, Achọrọ m ka e nwee ọdịiche dị n'etiti Marketingntanetị ịre ahịa ma ọ bụ ịre ahịa ọtụtụ ọkwa (MLM) na blọọgụ ahịa n'ịntanetị. Agbanyeghi na m kwanyere ufodu uzo ndi ndi Multi-Level Marketers tinye aka, ulo oru a na ndi ahia ahia enweghi ike itinye aka na olile anya ha n'otu uzo. Ọ ga-amasị m ka Blọọgụ Ahịa ga-amata ọdịiche dị iche na onwe ha.
Kedu njirimara ị hụrụ na ị na-etinye na Blog Marketing? Njirimara ndị dị a makeaa na-eme ka ị chọọ ịpụ? Kedụ isiokwu ndị ị ga - achọ ka anyị tụlekwuo? Ikwu okwu na post a ma ọ bụ jiri Nzaghachi taabụ na ekpe.